Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ajụjụ Ọnụ » Ndị njem nlegharị anya Africa: Njem nlegharị anya na-enweghị ihe mgbochi ugbu a!
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ajụjụ Ọnụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi oche ATB Ncube
Kansụl EAC nke njem nlegharị anya na ndị minista anụ ọhịa kwadoro n'etiti afọ a, ihe ngosi ngosi njem nlegharị anya mpaghara East Africa kwa afọ (EARTE).
Ahọrọ Tanzania ka ọ nabata EARTE nke mbụ nwere isiokwu nke "Nkwalite njem nlegharị anya maka mmepe mmekọrịta ọha na eze." Emechiri ihe ngosi ahụ n'isi mbido izu gara aga.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) Onye isi oche ya bụ Mazị Cuthbert Ncube nọchitere anya ya na ndị nnọchi anya ndị ọzọ sitere na mpụga ngalaba EAC.
Mazị Ncube mere okwu Executive Talk gbasara ọrụ ATB na mmepe njem nlegharị anya Africa.
eTN: Gịnị bụ isi ọhụụ nke Africa Tourism Board maka njem nlegharị anya Africa?
NCUBE: Ebumnuche anyị bụ iji hụ na Africa ga-abụ "Otu ebe njem nlegharị anya” nhọrọ n'ụwa. Anyị lekwasịrị anya na mmepe, nkwalite na ire njem nlegharị anya Africa site n'ụzọ dị iche iche.
Ndị a na-agụnye ịja, ịchịkọta ihe onwunwe, na mmetụta ime amụma iji hụ na Africa ghọrọ "Otu ebe Nhọrọ n'ụwa."
Board (ATB) na-arụkọ ọrụ ugbu a na gọọmentị Africa n'akụkụ dị iche iche nke anyị chere na ọ ga-eme ka ọganihu njem nlegharị anya na Africa dị ngwa. Nke a gụnyere iwepụ ihe mgbochi n'etiti steeti 54 dị n'Africa iji dọta njem nlegharị anya Intra-Africa.
eTN: Kedu ka kọmiti njem nlegharị anya Africa si enyere mba Africa aka inweta ọtụtụ ihe na njem nlegharị anya?
NCUBE: Ndị otu na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka na-agba mbọ inyere gọọmentị, ngalaba nkeonwe, obodo na ndị ọzọ metụtara aka n'ịkwalite na ikwado uto na mmepe njem nlegharị anya n'Africa.
Anyị na United Nations (UN) na African Union (AU) na-arụkọ ọrụ iji nweta ebumnuche AU Agenda 2063 na 2030 UN Sustainable Development Goals (SDG) site na njem nlegharị anya.
Nke a gụnyere ịre ahịa, ire ahịa, na ịkwalite Africa dị ka otu ebe njem nlegharị anya n'ọgbọ ahịa nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke kọntinent anyị (ATB) na-agba mbọ ugbu a site n'aka gọọmentị Africa, òtù azụmahịa, òtù na-abụghị nke gọọmentị, African Union, na otu United Nations na mpaghara mpaghara iji hụ na njem n'efu maka ụmụ amaala Africa n'ime Africa site n'otu obodo gaa na mba ọzọ.
eTN: Kedu mmegharị na ụdị mmadụ ka ATB na-ezubere iche?
NCUBE: Ebumnuche bụ maka ndị Africa ka ha gaa njem n'ime Africa, malite na obodo nke ha - ndị mmadụ na-eme njem n'ime obodo ha dị ka ndị njem nlegharị anya n'ime ụlọ, na mpaghara mpaghara, na mgbe e mesịrị na Africa dum. Otu East African Community (EAC) ewepụtala ụzọ maka ụdị njem nlegharị anya mpaghara.
Anyị nwere ike ịhụ ndị Kenya na-eleta Tanzania na ndị otu EAC ndị ọzọ, otu ndị Tanzania na ndị ọzọ. Ndị si na mpaghara EAC ndị ọzọ nwere ike ịga na Western Tanzania, Uganda, na Rwanda ịhụ chimpanzees, gorilla nke na-adịghị ahụ na ndị ọzọ so.
N'ịgbakwụnye, ATB na-agba mbọ ka ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ mee njem dị mfe iji tinye otu visa iji gafee oke mpaghara na Africa. Nke a nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ ka ha nọrọ ọtụtụ ụbọchị na Africa site na mmegharị dị mfe gafere oke site na iji otu visa.
eTN: Na mpụga South Africa na Arab North Africa, kedu ihe Board na-eme iji nyere ndị Sub-Saharan Africa aka inweta ọtụtụ ihe na njem nlegharị anya?
NCUBE: Anyị na ọtụtụ mba Africa jikọrọ aka iji hazie ihe ngosi njem nlegharị anya na-ezubere njem nlegharị anya nke ụlọ na mpaghara. Anyị nwere afọ gara aga (2020), ihe ngosi dị otú ahụ na Tanzania - UWANDAE Expo.
Otu ndị nnọchi anya ATB sitere na Sierra Leone, Nigeria, South Africa, Botswana, Ghana, Ethiopia, na Egypt sonye na EARTE na Arusha. Mmachibido njem njem na ọrịa COVID-19 emetụtala ọrụ anyị, mana anyị ka na-aga n'ihu.
Ndị otu na-ahụ maka njem nlegharị anya Africa na-arụkọ ọrụ ugbu a na International Tourism Investment Conference (ITIC) maka itinye ego na kọntinent n'ịkwalite mmepe njem nlegharị anya n'Africa.
Site na ITIC, ndị na-etinye ego si Bulgaria na mmekorita ya na ndị ọzọ na-etinye ego, ga-emebe $72 nde na ụlọ oriri na ọṅụṅụ 4 na Northern Tanzania, n'ime Tarangire, Lake Manyara, Serengeti, na ogige anụ ọhịa Ngorongoro.
Tanzania bụ onye mbụ ga-erite uru na ntinye ego ITIC ga-eweghara site na Jenụwarị n'afọ na-abịa 2022.
Ndị Board na-arụkọkwa ọrụ na gọọmentị nke Alaeze Eswatini ma guzobe atụmatụ ga-akwalite omenala ndị Africa anyị. Ihe ngosi omenala na ihe nketa bụ akụkụ nke njem nlegharị anya nke ụlọ na omenala nke na-adọta ìgwè mmadụ nke obodo maka mmepe njem nlegharị anya nke ime ụlọ.
eTN: Kedu ka bọọdụ a si enyere aka melite nke a?
NCUBE: Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Afrịka na-enyekwa ebe ndị nta na ndị na-etinye aka n'ụzọ dị ọnụ ahịa na nke dị irè iji nweta ahịa, mgbasa ozi na ndị njem n'ahịa ndị njem nlegharị anya maka Africa. Ebumnobi a bụ iji nweta ikike njem nlegharị anya mpaghara, yana ebe njem nlegharị anya nke ime ụlọ na nke dị n'ime Africa iji belata ịdabere na ndị njem nlegharị anya Europe na America.
Mgbawa nke ọrịa COVID-19 akụziworo nkuzi na Africa kwesịrị ịdabere na onwe ya na njem nlegharị anya. Mkpọchi na mmachi njem ndị amachibidoro na Europe, United States, Asia na ahịa ndị njem nwere ike emetụtawo njem nlegharị anya Africa nke ukwuu.
Africa na-enweta ihe dị ka nde ndị njem nlegharị anya nde iri isii na abụọ n'ime ihe karịrị otu ijeri ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ a na-edekọ kwa afọ. Europe na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 62 ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya anyị na-akwado ugbu a maka ndị njem nlegharị anya mpaghara. Ọ bụ nzọụkwụ ziri ezi maka ebumnuche ebumnuche nke Africa ịhụ EAC dị ka otu nkwekọ na-ejikọta aka na usoro nsonye na nhazi nke ọma.
ATB ga-eme ihe ngosi na Qatar Travel Mart (QTM) nke ga-eme n'etiti ọnwa Nọvemba. Anyị akpọọla ndị minista njem nlegharị anya Afrịka ka ha sonye, ​​na-achọ ịdọta ọtụtụ ndị njem nlegharị anya ileta Africa yana na-adọtakwa mmepe nke njem nlegharị anya n'ime Africa.
eTN: kedu ka ndị otu na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka siri were gosi ihe ngosi nlegharị anya nlegharị anya nke East Africa nke mbụ (EARTE)?
NCUBE: Njem nlegharị anya na mpaghara EAC emetụtala nke ọma. Ndị odeakwụkwọ EAC egosila mbelata njem nlegharị anya mpaghara ihe dị ka pasenti 67.7 n'afọ gara aga (2020) ruo ihe dị ka nde ndị njem mba ụwa 2.25, na-efunahụ ijeri US $ 4.8 site na ego ndị njem nlegharị anya.
Mpaghara EAC ebuburu amụma na ọ ga-adọta ndị njem nlegharị anya nde iri na anọ na 14 tupu ọrịa COVID-2025 emetụtala usoro a nke ọma.
Mpaghara EAC nwere naanị pasentị 8.6 nke ego ndị njem nlegharị anya n'Africa na pasentị 0.3 nke mbata njem nlegharị anya ụwa.
Kenya na Tanzania bụ ezigbo ihe atụ nke mpaghara mpaghara na-abịa ebe ndị njem nlegharị anya nwere ike ịgafe oke mpaghara ka ha wee nwee ọ enjoyụ akụrụngwa njem nlegharị anya.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-arụkọ ọrụ ugbu a na gọọmentị Africa na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye onyinye iji kwalite mmekọrịta dị n'etiti obodo na ndị na-eme njem nlegharị anya.
Enweghị njem nlegharị anya na-enweghị obodo. Obodo bụ ndị nnọchi anya njem nlegharị anya. Njem nlegharị anya anyị na njem nlegharị anya na Africa gbadoro ụkwụ na mpaghara obodo.
eTN: Site n'echiche ATB, kedu ihe ọ pụtara isonye na EARTE mbụ?
NCUBE: Ọ bụ nzọụkwụ ziri ezi maka ebumnuche ebumnuche nke Africa ịhụ EAC dị ka mgbochi na-ejikọta aka dị ka otu n'ụzọ megidere nkewa n'otu n'otu nke na-agaghị eburu anyị ebe ọ bụla dị ka kọntinent.
Lee, anyị achọpụtala mgbọ nke onye isi ala Tanzania Samia Suluhu Hassan, onye bụ onye mmeri na onye ọsụ ụzọ na atụmatụ mmepe Africa site na njem nlegharị anya. ATB enyela Onye isi ala Samia onyinye nturu ugo nlegharị anya na mba ofesi 2021. O guzosiri ike ka ngalaba ahụ na-agbakeghachi azụ n'etiti ajọ ọrịa Covid-19.
Onye isi ala Zanzibar, Dr. Hussen Mwinyi, malitere mpaghara EARTE kwa afọ na Tanzania ka ọ bụrụ ntụgharị n'etiti obodo ọ bụla. Ihe ngosi mpaghara a ga-ewere Africa ka otu ebe a na-ahọrọ, na-elekwasị anya na mmepụta kọntinent. Anyị kwesịrị imebi ihe mgbochi.
eTN: ATB ewepụtala usoro mgbake ọ bụla maka mpaghara njem iji nwetaghachi n'ụkwụ ya?
NCUBE: Òtù na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-arụkọ ọrụ na mba Africa iji mee mkpọsa maka mgbake njem nlegharị anya na East Africa na Africa. Anyị na-etinye netwọkụ ahịa mpaghara na ụwa na mgbasa ozi iji gbaa ndị ọbịa ume ka ha nweta akwụkwọ wee gaa Africa.
ATB na-agbasawanye na ohere maka ire ahịa, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, ntinye aha, ịkwalite, na iguzobe ahịa nlegharị anya niche.
Na mmekorita ya na ndị otu onwe na nke ọha, Board Tourism Board na-akwalite uto, uru na ịdị mma nke njem na njem nlegharị anya n'Africa.